IMango iveza iimpahla zayo zangaphandle zasebusika | Bezzia
IMango ifumanisa iimpahla zayo zangaphandle ezintsha zasebusika
UMaria vazquez | 27/10/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Kuqhelekile ukuba sizame ukwandisa ihlobo. Kufika ixesha, nangona kunjalo, xa iimeko zemozulu zisinyanzela ukuba singacingeli nje ukuba oku kukude, kodwa kungekudala kuya kufuneka sithi ndlela-ntle ekwindla ngokunjalo. Impahla yangaphandle baba yinxalenye yempahla yethu yemihla ngemihla, yiyo loo nto uMango engazange alibazise ukusibhaqa ngezindululo zabo ezintsha.
Andazi ukuba kuya kuba njani intsasa kumazantsi esiqithi, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba kuyabanda apha. Iidigri ezisixhenxe ngentsimbi yesibhozo kusasa zinyanzela ukuba ushiye indlu ubuncinane idyasi elula. Enye efana naleyo siyifumene kwi Ukuqokelelwa kweMango, apho iidyasi zoboya ezinde kunye nee-quilts ezingaphezulu zibonakala.
1 Iidyasi zoboya
3 Ezinye iimpahla zangaphandle
Iidyasi zoboya zabelana ngokuqaqamba kwingqokelela entsha yeMango eneedyasi eziphothiweyo. Eyangaphambili ilungelelanisa zonke iintlobo zezitayile, ezihlala kwingqokelela efanayo yoyilo lwakudala kunye nepateni ye-herringbone, uyilo olugqithileyo olunamagxa awileyo kunye nezindululo ezimangalisayo kunye iinkcukacha zomphetho kunye / okanye isikhafu esinokukhutshwa. Ungazifumana ngemibala engathathi hlangothi ngaphandle kokukhetha okumbalwa kwiitoni eziluhlaza kunye noluhlaza.
I-padding iya kuba nendima enkulu kulo nyaka. Uyilo olude nge iipateni ezigqithisileyo kunye nentamo ephezulu. Uyilo olunokuzaliswa kunye nolwelo lwangaphakathi olwenziwe ngokubanzi lwepolyester oluya kukukhusela ebanda. Kwaye ukusuka emvuleni, kuba iMango iquka ukugxotha amanzi okanye ukuyila kwamanzi kwingqokelela yayo. Kunye nezi, iivesti zigqamile, zigqibelele ngeli xesha lonyaka.
Ipaki ayinakuphoswa kwingqokelela yeedyasi. Le ecetywayo yiMango, eyenziwe ngomqhaphu, inephaneli yangasemva ephothiweyo. Yi ipaki enkulu ene-hood ekwaziyo ukususa, zip kunye nokuvalwa kweqhosha. Isambatho se-terrain yonke esiza kufumaneka kungekudala.
Ezinye iimpahla zangaphandle
Nangona bengenako ukuduma okungako, unokufumana phakathi kweengubo zangaphandle zeMango ezininzi uyilo lokucheba. Abanye abanale laphu njenge-protagonist, abanye kunye nomphandle oxelisa ulusu kunye ne-shearling yangaphakathi, ilungele iintsuku ezibandayo.
Enye isambatho esitsala ingqwalasela enkulu kwingqokelela yi idyasi yefaux ebuyiselwa umva ngokulukwa kweenwele. A idyasi enamacala amabini ukugqithisa kwiitoni eziluhlaza kunye nekhola ye-lapel, i-zip fastening kunye neepokethi ezimbini zecala.
Ngaba uyazithanda iimpahla zangaphandle zeMango entsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » IMango ifumanisa iimpahla zayo zangaphandle ezintsha zasebusika
Umnqweno kunye nolonwabo njengezinto eziphambili kubudlelwane besibini
Iingcebiso zokuthethisa ikati yakho kodwa 'uziphathe kakuhle'